Kayah, the land of Kayan (Long neck hill tribe of Myanmar) | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on January 20, 2017 January 20, 2017 by Nu Myat
ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမြို့တော်လွိုင်ကော်ရောက် နေ့ရက်များ…
ကြေးကွင်းစွပ် ကယန်း(ပဒေါင်)လူမျိုးတွေရဲ့ ရွာ…. ပဟေဌိဆန်ဆန် အခေါင်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ ကြတ်ဂူ… ထီးပွင့်လိုရေတွေပွက်ပွက်လာတဲ့ ထီးပွင့်ကန်… ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ တောင်ကွဲစေတီရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဏာရီလာ ဒွေးမယ်နော်တို့ပျော်စံရာ ကယားပြည်နယ်မှာ လည်စရာတွေ ထင်ထားတာထက်ပိုများနေပါတယ်။
၂ညအိပ် ၃ရက် Non Stopသွားတာတောင် လည်စရာမကုန်နိုင်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ နေရာ စုံသွားချင်ရင် ၃ညအိပ် ၄ရက် Or ၄ညအိပ်၅ရက်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။
ကဲ..နုမြတ်နဲ့ အတူတူ Online ပေါ်ကနေ ကယားပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်ကြည့်ကြရအောင်နော်…
မနက် ၉နာရီထွက်တဲ့ MNA လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ မနက် ၁၀နာရီမှာ လွိုင်ကော်ကို ရောက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ခက အသွား ၆၃၀၀၀ နဲ့ အပြန် ၆၁၀၀၀ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၁၂၄၀၀၀ ကျပ်ပေါ့။ လွိုင်ကော်ကို တိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်။ လေယာဉ်တစ်စီးလုံး အပြည့်။ ထင်တောင်ထင်မထားဘူး။ အများစုက နိုင်ငံခြားသားတွေ။ ကိုရီးယား တစ်အုပ်စု ပါလာတာလည်းတွေ့ရတယ်။ စိတ်ထင် ကယန်းလူမျိုးတို့ ရှေးကယားလူမျိုးတို့လို လူမျိုးစုတွေ နေထိုင်ရာ ရွာတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာလေ့လာကြတာထင်တယ်။
လေဆိပ်မှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Amazing Kayah Travel & Tour ကနေ ကားနဲ့လာကြိုပါတယ်။ ကားက ၈ယောက်စီးကားကြီးပါ။ သွားမယ့်နေရာတွေပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နေ့ကို ၈သောင်းကနေ ၁သိန်းလောက်ကျပါတယ်။ ဆီခနဲ့ ဒါရိုင်ဘာခပါအပြီးပေါ့။ ကျွန်မတို့က နေမယ့်ရက်နည်းပြီး သွားချင်တဲ့ နေရာများတော့ ဟိုတယ်မှာ Check In အရင်မ၀င်ဘဲ လည်စရာရှိတာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်က မြို့တော် လွိုင်ကော်နဲ့ မဝေးပါဘူး။ ခဏလေးနဲ့ရောက်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ First Impression ကတော့ အေးချမ်းသန့်ရှင်းတဲ့ မြို့လေးလို့ထင်မိပါတယ်။ ထင်ထားတာထက် ပိုသန့်ရှင်းလှပသလားလို့။ လမ်းလေးတွေက ကတ္တရာလမ်းခင်းထားပြီး ရွှေရောင် ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမောင်နှံ ရုပ်တုအ၀ိုင်းပတ်လေးက ကယားအငွေ့အသက်ပေးနေလေရဲ့
အရင်ဆုံး လေဆိပ်ကနေ လောပိတရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံဆီကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။ လွိုင်ကော်ကနေတစ်နာရီကြာမောင်းရပြီး လမ်းတလျှောက်တောတောင်ရှုခင်းတွေက လှမှလှ။ View Point မှာရပ်ပေးတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ဆင်းရိုက်ကျသေးတာပေါ့။ လမ်းဘေးတလျှောက်ရေပိုက်ကြီးတွေတွေ့ကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းတုန်းက ခဏခဏသင်ရတဲ့ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ရောက်တော့မှာကိုး။
ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၂) ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလို့ခေါ်တဲ့ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံက အကြီးကြီးပါ။ အရင်က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေးဖို့လုံလောက်ပေမဲ့ ခုတော့ ဘယ်ရတော့မလဲ။ အစစအရာရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိမှ နေတတ်တဲ့ ခေတ်…မီးကိုအားကိုးတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေတာကိုး။ စက်ရုံထဲမှာ ၂၈မဂ္ဂါဝပ် စက်ကြီး ၆လုံးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၃လုံးကဂျပန်တွေ စစ်လျော်ကြေးအဖြစ် ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ သုံးလုံးကတော့ အစိုးရက ထပ်ဝယ်ပြီး ဖြည့်ထားတာပါတဲ့။ စုစုပေါင်း ၁၆၈ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပေမဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလိုတဲ့ လျှပ်စစ်အားက ၁၆၀၀ လောက်ရှိနေတာဆိုတော့ တခြားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေကနေပါ လျှပ်စစ်အားရယူရတာပေါ့
လျှပ်စစ်စက်ရုံကနေ ၁၅မိနစ်လောက်လျှောက်သွားရင် ရေတံခွန်ဆီရောက်ပါတယ်။ လူမလာတဲ့နေရာမှာ ရှိတော့ တကယ့် သဘာဝအတိုင်းပါပဲ။ သာယာချက်က ရေလေးတွေဆို စိမ်းပြီး ကြည်နေတာ။ ငါးအုပ်လေးတွေဖြတ်ကူးနေတာ အသေးစိတ်တွေ့ရတယ်။ ရေကြည်ချက်က ရေအောက်ကြမ်းပြင်ထိ တိုးလျှိုပေါက်…အင်းလေးကန်ကနေ မိုးဗြဲဆည် အဲ့ကနေ ဘီလူးချောင်းဟောင်းတလျှောက်စီးဆင်းလာပြီး ရေတံခွန်ကို ဖြတ်ကာ သံလွင်မြစ်ထဲ စီးဆင်းသွားတာတဲ့။
မြို့ထဲပြန်ရောက်တော့ နေ့လည် ၁နာရီခွဲပြီဆိုတော့ ဗိုက်ဆာပြီပေါ့။ အဲ့တော့ ကယားရိုးရာစာမစားသေးဘဲ အမြန်ရတဲ့ မြန်မာဆိုင်မှာ စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတော်ကောင်းတဲ့ မြန်မာဆိုင်ပါ။ ရွှေလက်ရာတဲ့ ဆိုင်နာမည်က။ လွိုင်ကော်မှာ နာမည်ကြီးပေါ့။ တို့စရာတွေဆို ရှယ်ပဲ။ ဟင်းရည်တွေ အရံဟင်းတွေက ကောင်းမှကောင်း။ ဟင်းပွဲမမှာစားဘဲ အရံဟင်းတွေနဲ့တင် တင်းတိမ်နေပြီ… အဲ့ထဲမှာ ဂျူးမြစ်နဲ့ ပုစွန်ချဉ်သုပ်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်။
ဗိုက်ဝတော့ ကယားရဲ့ နာမည်ကျော် ကြတ်ဂူဆီ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဟေဌိတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဂူလို့လည်း ပြောရမှာပါ။ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ ကျောက်ဂူကြီးတွေထဲမှာ သစ်သားအခေါင်းပျက်တွေ တောက်လျှောက်အစီအရီ ရှိနေတာ အတော်ကို ထူးဆန်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးကလည်း ကြတ်ဂူဆိုတော့ နာနာဘာဝ ကြတ်တွေနေထိုင်ရာဂူများလားတွေးမိရင်း ကြောထဲစိမ့်တတ်လာမိတာပေါ့လေ…
ဂူက ကျောက်တောင်အမြင့်ပေါ်ရှိပြီး ဂူအပေါ်တက်တဲ့ လှေကားရင်းက ကြတ်ဂူဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀က ဒီ အခေါင်းတွေထဲ အရိုးစုတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဝင်ကြည့်တော့ အရိုးစုတွေ မရှိတော့ဘဲ ပျက်စီးနေတဲ့ ခေါင်းတလားတွေသာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တချို့အပြောကတော့ အဲ့ကတည်းက အရိုးတွေကို စုပြီး သဂြိုဟ်ပေးလိုက်လို့ မရှိတော့တာတဲ့။ ရှေးခေတ်ကြတ်လူမျိုးတွေက သေတဲ့အခါ ဂူထဲလာထည့်လေ့ရှိတယ်တဲ့လေ။ အခေါင်းတွေက ၂ပေကနေ ၁၅ပေအရှည်ထိရှိကြပြီး အရင်က ကျောက်နံရံတွေမှာ ကပ်ပြီး ထောင်ထားကြသလို မျက်နှာကျက်မှာလည်း ချိတ်ဆွဲထားကြတယ်။ မျက်နှာကျက်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အခေါင်းတစ်ခုကို အခုထိတွေ့မြင်နိုင်ပြီး အဲ့ထဲမှာတော့ အရိုးစုတွေ ရှိနေသေးလား မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေ။
ကြတ်ဂူကြီးက တော်တော်ကို နက်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်အောက်ခြေက ဘုန်းဘုန်းကို ၀င်ဖူးပြီး လေ့လာချင်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းပြောပါက မီးစက်ထွန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင် မှောင်ထဲ မဲထဲ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့ အခေါင်းတွေကြားဖြတ်ရမယ့် အဖြစ်ပါ။ မီးစက်က ပေ၂၀၀၀ အထိသာမီးသွယ်ထားတာပါ။ အရှည်က ဘယ်လောက်ထိရှည်လည်း မသိဘူး။ မနှစ်က ဂျပန်တစ်ဖွဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေနဲ့ မနက် ၆နာရီက ထွက်သွားတာ ညနေ၆နာရီမှာ ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ အဆုံးထိမရောက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့လေ။ ကျွန်မတို့ကတော့ ပေ၁၂၀၀ အထိပဲရောက်ခဲ့တယ်။ တခြားလည်း သွားစရာတွေ ရှိသေးတော့လေ။ ပေ ၁၀၀၀ မှာတော့ အခေါင်းပျက်တွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တချို့ကတော့ ဒါလူသေအလောင်းထည့်ရာ အခေါင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ။ ယမ်းတွေကို သစ်သားခေါင်းတွေထဲ ထည့်ပြီး ဂူထဲ သိုလှောင်ထားကြတာလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်အယူအဆမှန်လဲ ဆိုတာကတော့ မျက်နှာကျက်ကနေ ပြုတ်မကျသေးဘဲ ကျန်နေတဲ့ အခေါင်းကို ဖွင့်ကြည့်မှသာ သိရမှာပါ။
ဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက် အဲ့ဒေသရဲ့ ပြတိုက်မှာ လေ့လာစရာ အများကြီးပါ။ ကယားမှာရောပဲပေါ့။ ၀င်ကြေးကလည်း ၅၀၀ကျပ်ပဲဆိုတော့ ၀င်ကြည့်သင့်တာပေါ့။ ပြတိုက်က အဆောက်အအုံကြီးပေမဲ့ ပြခန်းကတော့နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကယန်း၊ ကယော၊ ရှေးကယားစတဲ့ လူမျိုးစုတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ၊ Life style တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ တူရိယာပစ္စည်းတွေ ပြသထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ…
လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ရှေးဟောင်းတောင်ကွဲစေတီဟာ မြို့ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ အက်ကွဲနေတဲ့ ကျောက်တောင်တွေလို့ ပြောရမလား။ တကွဲတပြားစီ ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ ကျောက်တောင်တွေလို့ ပြောရမလား မသိ။ ကျောက်တောင်တစ်ခုစီထိပ် စေတီတွေ တည်ထားတာကလည်း ထူးခြားနေပါတယ်။ ကျောက်တောင်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကူးဖို့ တံတားတွေ၊ တောင်ပတ်လမ်းတွေလည်း ဖောက်ထားသေးတယ်။ တောင်ကွဲစေတီရင်ပြင်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ လွိုင်ကော်မြို့ရှုခင်းက လှမှလှ… မှိုင်းပြတဲ့ တောတောင်နောက်ခံမှာ ရောင်စုံအိမ်လေးတွေ အစီအရီ။ တချို့တောင်ထိပ်တွေမှာ ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေ၊ အဆောက်အအုံကြီးတွေနဲ့ပေါ့… တကယ်သာယာပါတယ်
အရင်က စော်ဘွားဟော်နန်းကိုလည်း ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ နောက်ဆုံးစော်ဘွားက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူခဲ့လို့ အခု ဘုန်းကြီးတွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်နေပါတယ်။ သီရိမင်္ဂလာပုံကျောင်းလို့ အမည်ရပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီး လှေကားတက်တက်ခြင်းကတော့ ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ့။ မြောက်နန်းစံမိဖုရားခန်းအပြင်ဘက် လက်ယာဘက်လျှောက်လမ်းနံရံမှာ ကယားစော်ဘွားတွေပုံတွေ ပြသထားလေရဲ့။ ဟော်နန်းကြီးရဲ့ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြ Floor planကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ စော်ဘွားတွေ ဆင်စီးရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့စင်၊ မှန်စီရွှေချခဲ့ဖူးတဲ့ လူထမ်းဝေါယာဉ်တွေကိုရောပေါ့
မြို့ထဲက တန်ခိုးကြီး မြို့နာမ်စေတီကိုလည်း သွားဖူးသင့်ပါတယ်
မြို့လည်က နောင်ယားကန်က ရေတွေကလည်း ကြည်လင်ပြီး ငြိမ်သက်နေလို့ မှန်လိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကန်ကို ဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ ရောင်စုံလက်ရန်းတွေနဲ့ သစ်သားတံတားလေးနဲ့ ပနံကို သင့်လို့။ ကန်ဘေးမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတော့ အဲ့ညက ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အဲ့ဆိုင်တွေထဲက တစ်ဆိုင်မှာ ကယားစာတွေ စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကယားသွားတုန်းက ဘာတွေစားပြီး ဘယ်တွေ သွားရင်ကောင်းမလဲ Post တင်ပြီး မေးခဲ့တုန်းက Comment တွေ အကြံပေးထားတာတွေ မှာပစ်လိုက်တယ်။ ဖင်ကနေစုပ်စားရတဲ့ ဖင်ချွန်းခရုစွပ်ပြုတ်… တစ်ပွဲမှ ၅၀၀ ၁၀၀၀လားရယ် ခရုလေးတွေအများကြီးပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်ရည် အရသာကလည်း ကောင်းမှကောင်း…. မစားမဖြစ် ကယားဝက်အူချောင်း၊ ၀က်ရိုးရာဟင်း၊ ငါးခဲပတ် အကုန်စားလို့ အရသာရှိမှရှိ…
လွိုင်ကော်ကနေ ဒီမောဆိုမြို့ သွားတဲ့လမ်း ဘယ်ဘက်ဘေးမှာ ငွေတောင်ဆည်ရှိပါတယ်။ လယ်ဧကများစွာကို ရေပေးဝေပေးနေတဲ့ ဆည်ကြီးပေါ့။ အဲ့ဆည်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ တောင်သုံးလုံးလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ရွှေတောင်၊ ငွေတောင်၊ ပတ္တမြားတောင်တွေတဲ့။ ရွှေတောင်ထိပ်မှာ ဒွေးမယ်နော် ခိုနားလေ့ရှိတယ်တဲ့။ ဆည်ကြီးကလည်း ရှုခင်းတွေသာယာပါတယ်
အဲ့ကနေဆက်သွားတဲ့အခါ ဒီမောဆိုမြို့မဈေးရောက်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ၃ရက်ပဲဖွင့်တဲ့ ဈေးကြီးပါ။ တနလာင်္၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ သုံးရက်ပဲ ဖွင့်တာပါတဲ့။
ဈေးထဲမှာ လည်ပင်းကြေးကွင်းစွပ်ထားတဲ့ ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေက ကိုယ်တိုင်ရက်ထားတဲ့ ချည်ပုဝါတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ကယန်းလူမျိုးအရုပ်နဲ့ သံလိုက်တွေ၊ ကြေးလက်ကောက် ငွေလက်ကောက်ကွင်းတွေ ပျားရည်တွေ ထိုင်ရောင်းနေကြတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူတို့ကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ အရိုက်ခံနေကြတယ်လေ… အင်းပေါ့ ဧည့်သည်တိုင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုခံယူရတာ သူတို့လည်း နေသားကျနေပါပြီ။ အားနာလို့ရော လိုချင်လို့ရော Magnet တစ်ခု၊ ပျားရည်တစ်ပုလင်း အားပေးလိုက်တယ်။ Magnet က ၅ထောင်တောင်၊ ပျားရည်ကတော့ ၁၅၀၀ ထဲ
အဲ့ဈေးမှာ ခေါင်ရည်တန်းလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ရောင်းသူတွေ အစီအရီထိုင်ပြီး ခေါင်ရည်ထည့်ထားတဲ့ ရေသန့်ဗူးကိုယ်စီ ရှေ့ချထားပြီး ရောင်းနေမကြတာ။ အနားစသွားကပ်တော့ ခွက်ထဲ ထည့်ခိုင်းပြီး မြည်းခိုင်းတယ်။ မက်မန်းဝိုင်လို ချိုချိုမွှေးမွှေးလေး.. တစ်ဗူးမှ ၂၀၀၀ ကျပ်ထဲ။
Community Based Tourism(CBT) လို့ခေါ်တဲ့ ကျေးရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ကယားမှာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်ကျေးရွာတွေထဲ လူနည်းစုတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပန်ပက်ရွာကတော့ ကယန်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာပါ။ အဲ့ရွာက ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေ နေအိမ်တွေကို သွားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပုဝါတွေယက်တဲ့အိမ်ရယ် ငွေထည်လက်မှုပစ္စည်းတွေ လုပ်တဲ့ အိမ်ရယ်ပါ။
ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေက ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ မပြောနိုင်ကြဘူး။ ဧည့်သည်တွေ၊ ကင်မရာတွေကိုလည်း စိမ်းမနေတော့ဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုနေတတ်နေပြီ။ အင်းပေါ့လေ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဧည့်ခံရတဲ့ ဧည့်သည်တွေကလည်း နေ့တိုင်းကိုး… ငွေထည်အိမ်က အဘွားဆို Telenor ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရထားတာ။ အဘွားက သီချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုပြတယ်လေ…
ရွာနားက ဈေးဆိုင်တန်းအရှည်ကြီးမှာတော့ ရိုးရာလက်မှုထည်တွေ၊ ဒေသထွက်စားသောက်ကုန်တွေ၊ ကယန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေ ၀ယ်လို့ရတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ သူတို့ရိုးရာ ၀တ်စုံကိုဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတာကိုပဲ။ ၀တ်စုံဖိုးပေးစရာမလိုဘူး။ တစ်ခုခုပြန်အားပေးလိုက်ရင်ရပြီ။ သူတို့လိုလည်ပင်း ကြေးကွင်းစွပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ တကယ့်ကြေးကွင်းတော့ ဘယ်စွပ်လို့ရမလဲနော်။ ကြေးကွင်းတွေက တအားလေးတာကိုး… ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှရုံလောက် ရှေ့တစ်ဝက်ကို ကြေးကွင်းတွေ ထပ်ပေးထားပြီး နောက်တစ်ဝက်ကို ဖဲကြိုးချည်ပေးထားတာ… တစ်ဝက်တောင်တော်တော်လေး…. ခေါင်းငုံ့လို့မရ မော့လို့မရနဲ့ ဇက်ကြောတွေတက်လာတာ… ဒီလောက်လေးလံတဲ့ ကြေးကွင်းကြီးတွေ အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းက စွပ်လာခဲ့တဲ့ သူတို့တွေကို လေးစားမိပြီပေါ့
ကိန္ဒရီ နတ်သမီး၇ဖော် ရေချိုးခဲ့တဲ့ ကန်၇ဆင့်ကို ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ကန်လေးတွေ သေးသေးလေးလောက်ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ ကန်ကြီးတွေက အကြီးကြီး…၇ကန်ဆက်နေတာ။ အဲ့ထဲက ၆ဆင့်မြောက်ကန်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ကန်နားမှာ စားသောက်ဆိုင်လည်း ရှိသလို ကန်စပ်မှာ ထိုင်ဖို့ တဲလေးလေည်း လုပ်ပေးထားတယ်။ နိုင်ငံခြားတွေမှာလို ကန်ထဲ ၀ါးဖောင်စီးတာတို့ လှေစီးတာတို့လို Activity တွေ လုပ်ပေးထားရင်း သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အနားမှာ ကယား ဒဏ္ဏာရီလာသူရဲကောင်း ဖိုးဗျားရဲ့ ခြေတံရှည် ရိုးရာအိမ်ကိုလည်းရှိတယ်။ သံမသုံးဘဲ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဒီကန်ကတော့ တကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ မီးတောင်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ အလျောက် ရေကန်အောက်ကနေ ဂက်စ်တွေထွက်တဲ့အခါ ကန်မျက်နှာပြင်မှာ ပူစီဖောင်းလို ဖောင်းတတ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အနီးအနားရှိ သဲတွေနုန်းတွေကို ဘေးကို ပြန့်ကျဲစေတဲ့အခါ ထီးပွင့်လို အ၀ိုင်းပုံ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ သွားတုန်းကဆို ရေကန်ထဲ ဟိုနေရာပွင့်လိုက် ဒီနေရာပွင့်လိုက်နဲ့ ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းနေတာ… တချို့ကြီးတဲ့အပွင့်တွေဆို ဗွမ်းခနဲ အသံတောင်မြည်တယ်။
သမိုင်းအရဆိုရင်လည်း ဒီကန်ကအရေးပါခဲ့တယ်။ နတ်သမီး၇ဖော် ရေဆင်းဆော့ခဲ့တဲ့ ဘုတ်တလုတ်ရေကန်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သုဓနုမင်းသားက တွေ့ပြီး အငယ်ဆုံးနတ်သမီးလေးရဲ့ အ၀တ်အစားတွေ ဖွက်ထားလို့ နတ်သမီးလေး မပြန်ရရှာဘဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေကန်က ဒီရေကန်ပါတဲ့လေ
ကယားနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်စပ်မှာ ရှီတဲ့ ထီးစဲခါးရေတံခွန်ကလည်း သာယာလှပါတယ်။ ရေတံခွန်က အမြင့်ကြီးကနေ စီးကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေတံခွန်နိမ့်နိမ့်လေးတွေ ဟိုတစ်နေရာ ဒီတစ်နေရာ ပြန့်ကျဲနေတာ သာယာလှပါတယ်။ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလုံးလှမ်းမြင်ရတဲ့ တံတားပေါ်က ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာ ရုပ်တုတွေ၊ ရေကန်ထဲက ရေသူမရုပ်တုတွေ၊ ဆင်ဖြူတော်ရုပ်တုတွေ နဲ့ တခြားရုပ်တုတွေ ရေတံခွန်ဝင်းအတွင်း တွေ့ရတာလည်း အမြင်ဆန်းပါတယ်။
ထီးစဲခါးရေတံခွန်နားမှာ ကျောက်ခတ်ပန်းဆွဲတွေလှတဲ့ အောင်သပြေဂူရှိပါတယ်။ နားပေါက်အကြီးကြီးတွေရှိတဲ့ ကယောရွာတွေ၊ တစ်ခြမ်းစောင်းအင်္ကျီတွေဝတ်တဲ့ ရှေးကယားရွာတွေသွားမယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ပိုကုန်ပါမယ်။ အခြားလည်စရာတွေရှိသေးရင်လည်း Comment မှာ ပြောပြကြပါဦးနော်။
ရရင်ရသလို ကယားရိုးရာစာတွေစားပလိုက်တယ်။ ကယားဝက်အူချောင်းဆိုကောင်းမှကောင်း၊ ကယားမှာပဲ သုံးတဲ့ မက်ခါသီးအရသာကြောင့် စပ်စပ်မွှန်မွှန်လေးဖြစ်နေတာ။ Order မှာပြီး အိမ်ပြန်သယ်လို့လည်းရတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ခံတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ရင် ပိုခံတယ်။ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ၅၀၀၀ ကနေ ၁သောင်းတန်အထိရှိတယ်။
ကယားမှာ ဟင်းထုပ်တွေဆိုလည်း ကောင်းတယ်။ မြို့ထဲဆိုင် မင်္ဂလာဟင်းထုပ်ဆို နာမည်ကြီးပေါ့။ တစ်ထုပ်မှ ၁၀၀ထဲရယ်။ ၅ထုပ်ဆိုကောင်းကောင်းဝပြီ။ အထုပ်အရွယ်က ၂လုပ် ၃လုပ်စာလောက်ရှိတာပေါ့။
နောက်ပြီး ဖင်ချွန်းခရုစွပ်ပြုတ်ဟင်းရည်၊ ကယားကြက်ရိုးရာ ၀က်ရိုးရာ ဟင်း၊ ငါးခဲပတ်တွေလည်းကောင်းတယ်။ Loikaw City စားသောက်ဆိုင်ကဆို အကင်တွေကြိုက်တယ်။ ဆတ်သားထောင်းနဲ့အာလူးထောင်းရောပဲ။
‘ဒီမေားဆိုးမြို့နား ပန်ပက်ရွာသွားတဲ့လမ်းမှာ Marcopolo ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရှိတယ်။ ဆိုင်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေ တအားလှတယ်။ အစားအသောက်ကတော့ တရုတ်စာပေါ့။
မြန်မာစာဆိုရင်တော့ လွိုင်ကော်မြို့ထဲက ရွှေလက်ရာဆိုင်ကောင်းပါတယ်။
တည်းခဲ့တာကတော့ Kayah Resort မှာပါ။ လွိုင်ကော်မှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရမှာပါ။ ဘန်ဂလိုအိမ်လေးတွေထဲ အခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိပြီး မနက်စာ Breakfast တွေလည်းကောင်းပါတယ်။ ရေကူးကန်လည်းရှိတယ်။
ဟိုတယ်လွိုင်ကော်၊ မြတ်နန်းတော်ဟိုတယ်၊ Loikaw Lodge by the Lake တို့လည်း မဆိုးဘူးလို့သိရတယ်။
*ကြတ်ဂူမှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းဘုန်းကို ၀င်ဖူးမြော်ပြီး မီးစက်ဖွင့်ခိုင်းပါ။ မီးစက်ဖိုးလည်း ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ကျပ် စုပြီး ကန်တော့လိုက်ပါ။ မှောင်ထဲမှာ အခေါင်းတွေကြားဖြတ်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပေမဲ့ ဂူထဲ ဖိနပ်မစီးရတော့ ခမှောင်ထဲ ခလုတ်တိုက်တာတို့ ခဲစူးတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မီးထွန်းထားတော့ ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာပေါ့
*တောင်ကွဲစေတီရဲ့ ဓာတ်လှေကားက ညနေ၅နာရီဆို ပိတ်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်ကို ပတ်ထားတဲ့ လှေကားတွေရှိပေမဲ့ တချို့လှေကားတွေက မတ်တော့ ဒူးနာတတ်တဲ့ လူကြီးတွေ အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။
*ကယားဝက်အူချောင်း စားဖြစ်အောင်စားပါ။ ပါဆယ်လည်း သယ်ပါ။ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ၅၀၀၀ကျပ်ကနေ ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိပေးရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင် သင်လို့လည်းရပါတယ်။
*ကျေးရွာတွေလေ့လာတဲ့အခါ အဖွဲ့လိုက် တစ်အိမ်ကို ကျပ် ၃၀၀၀ပေးရပါတယ်။ ၂အိမ်ဆိုတော့ ၆၀၀၀ပေါ့။ အိမ်တွေကို လိုက်ပို့ပေးတဲ့ လိုက်ရှင်းပြတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို ၅၀၀၀ပေးခဲ့ရပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၁၀၀၀ကျပ်ပါ။ အိမ်ပိုင်ရှင် အဖွားတွေက ၃၀၀၀မှာ ၂၇၀၀ဆီရပြီး ကျန်တာက ရွာရံပုံငွေပါ။
*ကျေးရွာတွေ သွားလည်တဲ့ အခါ အဲ့မှာ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာထက်ပိုဈေးများပါတယ်။ အဘွားတွေကို အားပေးချင်လို့ ဆိုရင်တော့ ၀ယ်ပါ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းလိုချင်ရုံဆိုရင်တော့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေ ရောက်မှ ၀ယ်ပါ။
Amazing Kayah Travek & Tour – 09 560 0315
Mira Travels – 09260066697, 095002362
Kayah Resort : 09 258 887 070
ဟိုတယ်လွိုင်ကော် : 083 22 946 Ext 22947
Loikaw Lodge by the Lake : 09 263 319 797
Loikaw City Restaurant : (08) 323 051; (094) 100 7651
Marcopolo Restaurant ဒီမောဆိုး : 09492 40231
ကောင်းကျော်ဟိန်းစားသောက်ဆိုင် : (09) 42 800 2355; (09) 4940 2235
ရွှေရတီစားသောက်ဆိုင် : (0942) 800 1895; (092) 5403 6036
ရွှေလက်ရာ မြန်မာထမင်းဟင်း : 08322528, 09250972873
Live တင်ခဲ့တဲ့ Video Links တွေပါ
စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေကို ဖော်ပြပေးနေလို့ ဒီ Nu Myaအ around the World page ကို Like လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါစေ
This entry was posted in Adventure, Asia, Myanmar, Travel, Uncategorized and tagged Asia, kayah, kayan, loi kaw, Myanmar, Nature, Travel. Bookmark the permalink.
← Collection of my Travel Talks on MRTV4
Unicorn Cafe in Bangkok, Thailand →
One thought on “Kayah, the land of Kayan (Long neck hill tribe of Myanmar)”